हुम्ला – सर्केगाड गाउँपालिका–८ स्थित राहदेव सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा औषधि अभाव भएको छ । उक्त स्वास्थ्य संस्थामा करिब दुई महिनादेखि औषधि अभाव भएपछि राहदेव गाउँका स्थानीयवासी औषधोपचारबाट बञ्चित भएका छन् । “गाउँमा मौसमी फ्लुका बिरामी बढेका छन् । तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन”, स्थानीयवासी मेगराज रोकायाले भने “यसप्रति सरोकारवाला निकायको समेत ध्यान गएको छैन ।” उहाँका अनुसार आफू बिरामी भएको करिब दुई हप्ता भइसक्यो, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा सामान्य औषधि नपाएर रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएको छु ।
सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि अभावको जिज्ञासा राख्दा कस्ले भनेको औषधि छैन भनेर भन्दै झोक्किए । उनले औषधि दिने मैले नै हो मलाई थाहा नभएर अरुलाई हुन्छ भन्दै औषधि छैन भन्नेको नाम के हो ? भन्दै झर्किदै फोन काटिदिए ।
हुम्ला – सर्केगाडहुम्लाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव
हुम्ला – सर्केगाड गाउँपालिका–८ स्थित राहदेव सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा औषधि अभाव भएको छ ।
उक्त स्वास्थ्य संस्थामा करिब दुई महिनादेखि औषधि अभाव भएपछि राहदेव गाउँका स्थानीयवासी औषधोपचारबाट बञ्चित भएका छन् । “गाउँमा मौसमी फ्लुका बिरामी बढेका छन् । तर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि छैन”, स्थानीयवासी मेगराज रोकायाले भने “यसप्रति सरोकारवाला निकायको समेत ध्यान गएको छैन ।” उहाँका अनुसार आफू बिरामी भएको करिब दुई हप्ता भइसक्यो, स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा सामान्य औषधि नपाएर रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएको छु ।
सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि अभावको जिज्ञासा राख्दा कस्ले भनेको औषधि छैन भनेर भन्दै झोक्किए । उनले औषधि दिने मैले नै हो मलाई थाहा नभएर अरुलाई हुन्छ भन्दै औषधि छैन भन्नेको नाम के हो ? भन्दै झर्किदै फोन काटिदिए । गाउँपालिका–८ स्थित राहदेव सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा औषधि अभाव भएको छ ।